Orinasa mitsivalana mitrandraka amin'ny lalana mivantana. China Horizontal Directional Drilling Rig Manufacturer, mpamatsy
Ny fitrandrahana torolàlana marindrano na ny fanamavoana amin'ny lalana dia fomba fametrahana fantsona, fantsona na tariby ambanin'ny tany amin'ny alàlan'ny fampiasana rig fandavahana ambony.
SHD18 familiana fandavahana torolàlana
Ny fandefasana torolàlana SHD18 marindrano dia ampiasaina amin'ny fananganana fantsona tsy misy trench sy fametrahana indray ny fantsona ambanin'ny tany. Ny fantsom-panafody SHD18 mitsivalana dia manana tombony amin'ny fivoarana avo lenta, fahombiazana avo lenta ary fiasa ahazoana aina. Singa lehibe marobe no mampiasa vokatra malaza iraisam-pirenena hiantohana ny kalitao. Izy ireo no milina tsara indrindra amin'ny fananganana fantson-drano, fantson-tsolika, herinaratra, fifandraisan-davitra, rafitra fanamainana, indostrian'ny solika.
SHD20 fandavahana fandrefesana torolàlana
SHD20 Horizontal Directional Drills dia ampiasaina amin'ny fananganana fantsona tsy misy trench sy fametrahana indray ny fantsona ambanin'ny tany. Ny andian-tsarimihetsika SINOVO SHD marindrano dia misy tombony amin'ny fivoarana avo lenta, fahombiazana avo lenta ary fiasa ahazoana aina. Singa lehibe maro ao amin'ny andian-tsarimihetsika fandoroana boribory SHD mandray vokatra malaza iraisam-pirenena hiantohana ny kalitao. Izy ireo no milina tsara indrindra amin'ny fananganana fantson-drano, fantson-tsolika, herinaratra, fifandraisan-davitra, rafitra fanamainana, indostrian'ny solika.
SHD26 rig ary atsofohy amin'ny alàlan'ny fandavahana
SHD26 Fitrandrahana torolàlana marindrano na mankaleo mankany amin'ny lalana dia fomba fametrahana fantsona, fantsona na tariby ambanin'ny tany amin'ny alàlan'ny fampiasana rig fandavahana ambony. Ity fomba ity dia miteraka fiatraikany kely amin'ny faritra manodidina ary ampiasaina indrindra rehefa tsy azo ampiharina ny fantsakana na ny fitrandrahana.
SHD45 Fitrandrahana amin'ny lafiny marindrano
Ny rig ary atsofohy any Sinovo SHD45 dia manaparitaka fantsona matetika amin'ny fanamboarana fantsona tsy misy trench sy fametrahana indray ny fantsona ambanin'ny tany. Ny vilana fandavahana torolàlana SHD45 dia manana tombony amin'ny fivoarana avo lenta, fahombiazana avo lenta ary fiasa ahazoana aina, singa manan-danja maro no mandray vokatra malaza iraisam-pirenena hiantohana ny kalitao. Izy ireo no milina tsara indrindra amin'ny fananganana fantson-drano, fantsom-panafody, herinaratra, fifandraisan-davitra, rafitra fanamainana, indostrian'ny solika.
SHD68 rig fandavahana torolàlana
SHD68 Fampiharana familiana torolàlana mivantana:
Mety ho an'ny mpiasa, fandavahana sivily, fandavahana geothermal, miaraka amin'ny fandavahana savaivony lehibe, fandavahana lalina, fampiharana finday sy malefaka manana tombony ara-jeografika.
SHI200 familiana fandavahana torolàlana
SHD200 Fampiharana familiana torolàlana mivantana: Mety ho an'ny mpiasa, fandavahana sivily, fandavahana geothermal, miaraka amin'ny fandavahana savaivony lehibe, fandavahana lalina, fampiharana finday sy malefaka amin'ny tombony ara-jeografika.
SHD300 rig ary atsofohy ny rig
Ny fandavahana torolàlana marindrano na ny faniratsirana ny lalana dia fomba fametrahana fantsona, fantsona na tariby ambanin'ny tany amin'ny alàlan'ny fampiasana rig fandavahana ambony. Ity fomba ity dia miteraka fiatraikany kely amin'ny faritra manodidina ary ampiasaina indrindra rehefa tsy azo ampiharina ny fantsakana na ny fitrandrahana.
Sinovo dia mpamorona boribory boribory arahin'asa any China. Ny jirika fandavahana torolàlana SHD300 dia mihombo ampiasaina amin'ny fananganana fantson-drano, fantson-tsolika, herinaratra, fifandraisan-davitra, rafitry ny fanafanana ary indostrian'ny solika solika.
SHD350 rig ary atsofohy
Rig ary atsofohy ny rig dia fomba fametrahana fantsona, fantsona na tariby ambanin'ny tany amin'ny alàlan'ny fampiasana rig fandavahana ambony. Ny rig ary atsofohy amin'ny sisiny atsofohy Sinovo SHD350 dia ampiasaina amin'ny fanamboarana fantsona tsy misy trench sy fanoloana ireo fantsona ambanin'ny tany.
SHD350 Rig ary atsofohy ny rig ary azo ampiasaina amin'ny tany fasika, tanimanga ary vatokely, ary ny maripana manodidina azy dia - 15 ℃ ~ + 45 ℃.